यस वर्ष साढे चार प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि दर: अर्थविज्ञ - Aarthiknews
काटमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रको गतिविधि ठप्प भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना वित्नै लाग्दा शुरु भएको यो महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकोले आर्थिक वृद्धिदर करिब आधाले घट्ने अनुमान अर्थविज्ञहरूले गर्न थालेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका थियो । तर, कोरोनाका कारण यस दर करिब आधामा सीमित हुने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्माले बताए ।
कोरोनाको प्रभाव एउटा क्षेत्रमाभन्दा पनि कृषिदेखि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा पनि देखिन थालिसकेको अर्का अर्थविज्ञ प्राडा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘कोरोनाको अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्छ,’ उनले भने ‘अहिले आर्थिक वृद्धिदर यतिले घट्छ भनेर अनुमान गर्न नसकेपनि असर पक्कै पर्छ ।’ कृषि उत्पादनका लागि बिउ, मलदेखि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ समेत हामी परनिर्भर छौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्राय लकडाउनको अवस्था छ उनी भन्छन् ‘यसको शिकार हामीजस्ता देशले अझ बढी खेप्नुपर्छ ।’